ब'र्गरभन्दा बढी स्वस्थ हुन्छ स'मोसा, य'स्ता छन् का'रणहरु - HPsanchar.com
ब’र्गरभन्दा बढी स्वस्थ हुन्छ स’मोसा, य’स्ता छन् का’रणहरु
October 10, 2020 biplov adhikari खानपान 0
तपाईं स्वा’स्थ्य बिग्र’ने डरले समोसा खानु हुन्न ? यस्तो भइरहेको छ भने तपाईंले यी कु’राहरुलाई दि’मागबाट हटाइदिनुहोस् । पछिल्लो समय जन्क फुडप्रति नेपालीको पनि लगाव बढ्दै गइरहेको छ । समोसा छाडेर बर्गर खाने चलन नयाँ पुस्तामा झनै बढिरहेको छ । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि यही समस्या छ । त्यहाँको एउटा संस्थाले गरेको अ’नुसन्धानका अनुसार विदेश स्न्याक्स बर्गरको तुलनामा स’मोसा स्वा’स्थ्यका लागि अत्यधिक फाइदाजनक रहेको पाइएको छ ।
से’न्टर फर साइन्स एण्ड इन्भायरमेन्ट (सिएसई) नामको अनुसन्धान केन्द्रले केही समय अगाडिको स’मोसा र बर्गरमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानबाट ब’र्गरको तुलनामा समोसा खानु बढी स्वास्थ्यबर्द्धक देखिएको छ । अनुसन्धानमा स’मोसा बनाउने विधिमा ताजा र केमिकल मुक्त तरिका रहेको पाइयो । शुद्ध गहुँको आँटा, उ’सिनिएको आलू, केराउ, नुन, मरिच, मसाला, खुर्सानी र सब्जीको तेल वा घिऊ जस्ता वस्तुहरु समोसा बनाउँदा प्रयोग गरिएको पाइयो । यिनीहरु स्वा’स्थ्यका लागि हानिकार’क छैनन् । तर, बर्गर बनाउन शुद्ध गहुँको आँटा चिनी, गहुँको लस, भेजिटेबल तेल, यिस्ट, नुन, भटमासको आँटा, तिलको दाना, सब्जीहरु, मायोनेज, पनिर र आलुलगायतको प्रयोग गरिएको हुन्छ । यिनीहरुमध्ये कतिपय वस्तुहरु स्वा’स्थ्यका लागि फाइदाजनक हुँदैनन् ।
मा’सुका परिका’र खाँ’दा ध्यान दिनैप’र्ने कु’रा ! चा’डबाडका अवसरमा मा’सुजन्य परिकार र मा’दक पदार्थ सेवन बढी हुने गर्दछ । विशेषतः दसैँमा मा’सुका परिकार र मा’दक पदार्थ सेवन गर्नेहरु बढी हुन्छन् । तर‚ स्वा’स्थ्यका दृष्टिकोणले कति मात्रामा मासुका परिकार र मादक पदार्थ सेवन गर्ने भन्ने वास्ता गर्दैनौँ । पाए र सके जति खाने चलन छ । यसरी सेवन गर्दा शरीरलाई कस्तो असर पर्छ अड्कल कमैले मात्र गर्छन् । दसैँमा मासुका परिकारसँगै मदिरा‚ चिल्लो, पीरो मसलेदार खाना खाने चलन छ ।
कति खानेरपिउने: नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ अल्कोहल अब्युज एण्ड अल्कोहोलिज्मका अनुसार कुनै पनि मादक पदार्थमा सेवन गर्दा १४ ग्राम पिउनु उचित हो । त्यसलाई स्टान्डर्ड ड्रिंक्स् भनिन्छ । अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन तथा अमेरिकन डाइबिटिज एशोसिएसनका अनुसार ह्विस्कि, स्पिरिट सेवन गर्ने हो भने ४५ मिलिलिटर, बियर ३४० मिलिलिटर र वाइन, साइडर १४० मिलिलिटर पिउनु उपयुक्त मानिन्छ । ४५ वर्षमाथिका स्वस्थ शरीर भएका महिलाले दैनिक एक र पुरुषहरुले दिनको दुई पटक ड्रिंक्स गर्न सकिने सल्लाह दिइएको छ । कुनै पनि खानेकुरा खाँदा थोरै–थोरै मात्रामा धेरै पटक खानु राम्रो मानिन्छ । सागपात र फलफूलसहितको सन्तुलित खाना उपयुक्त हुने पोषणविदहरुको सुझाव छ । अत्यधिक चिल्लो, मसलेदार बोसोयुक्त खानाले ग्याष्ट्रिक बढाउने, अपच गराउने गर्छ । यसरी नै बासी खाना, काँचो मासु खाँदा फुड प्वाजन हुने प्रवल सम्भावना हुन्छ ।
बि’रामीले के गर्ने: म’धुमेहका बिरामीले मदिरा सेवन गर्नुपूर्व धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ । अमेरिकन डाइबिटिज एसोसियसनले र’गतमा सुगर अनियन्त्रित छ भने मदिरा वर्जित गरेको छ । एक–दुई पटक मदिरा पिउँदा डाइबिटिजका बि’रामीको र’गतमा सुगरको मात्रा बढाइदिन्छ । यति मात्र होइन कति बिरामीमा सुगरको मात्रा धेरै कम पनि गराइदिन सक्छ । मदिरा सेवन गरेपछिको २४ घण्टासम्म र’गतमा सुगरको मात्रा कम गराउन सक्छ। रगतमा सुगरको मात्रा चाहिनेभन्दा कम भएमा मानिसको मृत्यु समेत हुन्छ । त्यसैले मदिरा पिउने नै हो भने मदिरा सेवन गर्नुपूर्व सुगरको अवस्था कस्तो छ भन्ने परीक्षण गर्नुपर्छ । मदिरा सेवन गरेको बेला रगतमा सुगरको मात्रा १०० देखि १४० भित्रै राख्नुपर्ने अमेरिकन डाइबिटिज एसोसिएसनको सल्लाह छ।
डाइबिटिजको बिरामीले मदिरा सेवन गर्नुपरेमा खाली पेटमा पिउनु हुँदैन । साथै, कुनै पनि मदिरा सेवन गर्दा विस्तारै र डाइट सोडा वा पानीसँग मिसाएर मात्र पिउनुपर्छ । मुटुरो’ग भएका बिरामीहरुले मदिरा सेवन गर्दा मु’टुको चाल गडबडी हुने, र’क्तचाप अनियन्त्रित हुने, मुटुको काम गर्ने क्षमता कमजोर हुने आदि समस्या हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । त्यसैले यस्ता बिरामी मदिरा सेवनबाट टाढा रहन नै राम्रो भएको उनीहरुको सुझाव छ । रातो मासु र मदिराको अत्यधिक सेवनले र’गतमा कोलेष्ट्रोल तथा यु’रिक एसिड बढाउने गर्ने हुनाले मासु खाँदा चारखुट्टे जनावरको भन्दा कुखुरा, हाँसको मा’सु र माछा खानु राम्रो हुन्छ । सफ्ट ड्रिंक्समा हुने अत्यधिक गुलियोपनले पनि ग्या’ष्ट्रिक गराउने, मोटोपन बढाउने तथा र’गतमा ट्राइग्लिसेराइड जस्ता कोलेष्ट्रोलको मात्रा बढाइदिने भएकाले यस्ता पेय पदार्थभन्दा सादा पानी पिउनु नै उत्तम हुन्छ ।
कि’न खाने काँ’चाे केरा ? काँचो के’रा सम्बन्धी केहि उ’पयाेगी जा’नकारी ! केरा अर्थात सदाबहार फल । बजारमा केरा बाह्रैमास पाइन्छ । कसैलाई कमजोरी भयो र तत्काल इनर्जी चाहियो भने एउटा केरा क्वाप्प खाँदा हुन्छ, केही मिनटमै शरीरको कमजोरी हराइहाल्छ । केरामा भएका तत्वहरु तत्काल श’रीरले ग्रहण गरीहाल्छ, यसलाई पा’चनको लामो प्रकृयामा अल्झीनै पर्दैन । यही कारण केरा किलोको भाउमा हैन, दर्जनको भाउमा बिक्छ । किनकी, केराका गुण पनि दर्जनौं छन् । पाकेको केरामा अत्याधिक पोषणतत्व पाइन्छ । केरामा आइरन, क्याल्सियम तथा भिटामिन प्रशस्त मात्रामा हुन्छ । यो त पाकेको केराको कुरा भयो । काँचो केरा पनि कम हितकर छैन । काँचो केरा खाँदा शरीरमा आइरनको पुर्तिमात्र गर्दैन, कयौ रो’ग लाग्नबाट बचाउँछ । काँचो केराका फाइदा-
पो’टासियमको भ’ण्डार: शरीरका लागि पो’टासियम निकै आवश्यक छ । तर, पोटासियम सबै खानामा पाइदैन । यही कारण शरीरमा प्रायः पोटासियमको कमी भइरहन्छ । पोटासियमको मुख्य काम हो, शरीर स्फूर्त राख्नु र रो’ग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु । काँचो केरा पोटासियमको भण्डार हो । काँचो केरामा भिटामिन बी ६ तथा भिटामिन सी पाइन्छ, जसले कोशिकाहरुलाई पोषण प्रदान गर्छ । काँचो केरामा पाइने एन्टी अक्सिडेन्ट र आवश्यक स्टार्चले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ ।
म’धुमेहको औषधि: म’धुमेहका विरामीका लागि काँचो केरा अति उत्तम । काँचो केरामा भएको टरर्रोपनले रगतमा सुगरको मात्रा सन्तुलनमा राख्छ । धेरैजसो म’धुमेहका विरामीलाई अति गुलिया फलफुल खानबाट वञ्चित गरिन्छ । काँचो केरा भने म’धुमेह नियन्त्रण गर्ने एक औषधी नै हो । यही कारण उनीहरु काचो केराको तरकारी पेटभरी खानसक्छन् ।
क’ब्जीयत हटाउने काइदा: विहान शौचालयमा राम्ररी दिसा निख्रदैन । यसैलाई क’ब्जीयत भनिन्छ । क’ब्जीयतका कारण पेटमा विभिन्न रो’ग लाग्ने गर्छ । यदि तपाइलाई पनि क’ब्जीयत छ भने काँचो केरा खाइहाल्नुस् । काँचो केराको अचार, तरकारी बनाएर खान सकिन्छ । काँचो केरामा अत्याधिक मात्रामा फाइबर हुन्छ । फाइबर अर्थात रेशायुक्त केराले हाम्रो पे’ट सफा गर्छ । काँचो केरा खाएपछि शरीरमा विषाक्त जम्न पाउँदैन र विस्तारै क’ब्जीयतको समस्या समाधान हुँदैजान्छ । काँचो केरा यस्तो क्षारीय भोजन हो, जुन ग्यास्ट्रीकका विरामीका लागि समेत लाभकारी छ ।
तौल घटाउँछ: नियमती रुपमा काँचो केरा खाने हो भने मानिसको पाचनतन्त्र बलीयो हुन्छ र पे’टमा अतिरिक्त बोसो जम्न पनि पाउँदैन । बोसो जम्न नपाएपछि मोटो हुने चिन्तै रहेन । यसले गर्दा हाम्रो शरीरको तौल घट्न मद्धत पुग्छ । क’ब्जियतको समस्याबाट मुक्त: यदि तपाईलाई क’ब्जियतको समस्याले सताएको छ भने हरेक दिन काँचो केरा खाने गर्नुहोस । यसले तपाईलाई खाना पचाउन मद्धत गर्छ । जसले गर्दा तपाइको क’ब्जियतको समस्या हराएर जान्छ । यसमा पाइने फाइबरले पेट सफा गर्न मद्धत गर्छ ।
ह’ड्डी मजबूत पार्छ: फ्रुक्टोलिगोस्याचिराइड हुने भएकाले यसले हड्डी मजबूत पार्छ । यसले पाचनप्रणालीमा असल ब्याक्टेरिया सिर्जना गरी शरीरले खनिज र पोषक तत्व लिने क्षमतालाई मजबूत बनाउँछ । क्याल्सियमजस्ता तत्व लिने क्षमता वृद्धि गृर्छ । सुन्निएको निको पार्छ: केरामा ‘एन्टी इन्फ्लामेटोरी’ तत्वहरु हुन्छन् । यसको अर्थ के हो भने यो प्राकृतिक रुपमै सुन्निएको निको पार्छ भने आर्थराइटिस र यु’रिक एसिडमा लाभदायी हुन्छ । पोषक तत्व नपाएको अवस्था र वृद्ध अवस्थामा यस्ता समस्या देखिन्छ । त्यसैले दैनिक रुपमा केरा खाँदा यस्ता समस्या हट्छन् ।
तौल बढाउन पनि उपयोगी: केरा तौल बढाउन पनि उपयोगी हुन्छ । दूधसंग केरा खानाले तीब्र रुपमा तौल बढ्छ । दूधले आवश्यक प्रोटीन दिन्छ भने केराले चिनीको मात्रा उपलब्ध गराउँछ । यो सजिलै पच्ने भएकाले कम तौल भएको मानिसले दैनिक ५–६ कोसा केरा खानाले करिब ६ सय क्यालोरीसम्म प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा तौल बढ्न मद्धत पुग्छ । यसले शक्ति प्राप्त हुन्छ । खेलाडीले पनि थप उर्जा प्राप्त गर्न ब्रेकका बेला केरा खाने गर्छन्।
पा’यलको समस्या हटाउँछ: यदि दिसा सजिलै नआउने समस्या या पा’यल्स छ भने केरा यसको सही उपचार हो । केरा सूजनाप्रतिरोधी भएका कारण पा’यल्सको समस्या हटाउन मद्धत गर्छ । अ’ल्सर निको पार्छ: लामो समयदेखि केरा एन्टासिड खाद्यपदार्थको रुपमा प्रयोग हुँदैं आएको छ । यसमा भएका तत्वले पेटका कोषिकाका क्रियाकलापलाई बढाइदिन्छ र एसिड बन्न दिँदैंन । यसले अ’ल्सरको विकासमा कारक मानिएका पेटका खराब ब्या’क्टेरिया नष्ट गर्छ ।
मि’र्गौलामा समस्या निम्तन दिँदैंन: केराले शरीरमा तरल पदार्थको सन्तुलनमा नियमितता ल्याउन मद्धत गर्ने भएकाले मि’र्गौलामा समस्या निम्तन दिँदैंन । यसमा भएको एन्टीअक्सिडेन्टले मिर्गौलाले गर्ने काममा सकारात्मक असर गर्छ र विषाक्त पदार्थ बाहिर फ्याँक्न मद्धत गर्छ ।यसका साथै केरा दृष्टि शक्तिमा फाइदाजनक मानिन्छ भने पोटासियमको राम्रो स्रोत भएकाले पनि मु’टुका रो’गीलाई फाइदा गर्छ, उच्च र’क्तचाप घटाउन मद्धत गर्छ । उच्च आइरन हुने भएकाले रक्तअल्पता हुन दिँदैन ।
नोट: माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरु विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो । मानिसको शारिरिक अवस्था र समय अनुसार पनि माथि उल्लेखित कुराहरुको उपलब्धी फरक पर्छ । सम्पुर्णरुपमा यहि कुरामा मात्रै भर नपर्नुहोला । माथि उल्लेखित कुराहरु प्रयोग गर्दा तपाईको स्वास्थ्यमा थप खराबी देखिए, कृपया तुरुन्त रोकेर स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सल्लाह लिनुहोस् । साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।
महि’नावारी स’मस्या भएको महि’लाहरुलाई धेरै फाइदा गर्छ रा’जमाले
कि’न आउँ’छ अ’मिलो डका’र ? यस्तो छ कार’ण
घ’रमा उम्र’ने यो झा’र नफ्याँक्नुस्, यसमा हुन्छन् अ’नेकौं गु’ण
उ’परखुट्टी लगाएर बस्ने बा’नी छ ? सा’वधान ! स्वा’स्थ्यका लागि हुनसक्छ घात’क
अ’र्काले सेव’न गरेको चु’रोटको धु’वाँ कति ख’तरनाक ?
नखानुहोस् स्या’उको बीज, हुनसक्छ स्वा’स्थ्यका लागि ख’तरनाक
पे’टमा हुने ग्या’स र भा’रीपनको स’मस्याबाट छुटकारा पाउ’न अपनाउनुहोस् यी उ’पाय
थ्रे’डिङ ग’रीसकेपछि नगर्नुहो’स् यी ग’ल्ती, बि’ग्रिएला अ’नुहार